हेर्नुहोस आजको राशिफल : आइतबार कुन-कुन राशिका लागि फ’लदायी ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : आइतबार कुन-कुन राशिका लागि फ’लदायी ?
Khabar house | १४ मंसिर २०७७, आईतवार ०१:४० | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–चतुर्दशी, १५ घडी ०५ पला,मध्यान्ह १२ बजेर ३९ मिनेट उप्रान्त पूर्णिमा । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ३६ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०६ मिनेट । दिनमान २६ घडी १३ पला । शिव–वैकुण्ठ चतुर्दशी ।
मेष : राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले जनताको गतिलो समर्थन पाउने तथा पद प्रतिष्ठा पाउने समय रहेकोछ । नयाँ काम गरी मनग्गे आम्दानी वढाउन सकिने छ । व्यापार व्यावसायमा समय थोरै दिएपनि मनग्गे आम्दानी हुनेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ भने परिवारका साथ रहेर मिष्ठान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आट प’राक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउँनेछ ।
बृष : सामाजिक कामहरु समयमा गर्न सकिने हुँदा मानसम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । रोकिएर बसेका कामहरु सजिलै सम्पादन गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रुपमा सुदृड हुने समय रहेकोछ । बिद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी हरुलार्ई सजिलै किनारा लगाउदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्नेछन् । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे धन सम्पती कमाउन सकिने हुदा आवश्यक्ताहरु परिपूर्ती हुनेछन् ।
मिथुन : अरुको काममा समय बित्ने तथा अरुको काम गर्न खोज्दा आफ्नो काम थाती रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गर्दापनि आम्दानी थोरै हुनेछ भने विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जाने छ । यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ भने विदेशी सस्था तथा नियोगतिर काम पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सामान्य आँखा सम्बन्धी सम’स्याले सताउन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट : ईमान्दारिता पुर्वक गरीएको प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । सरकारी धन तथा पै’त्रिक सम्पत्तीको प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा पतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउदै नतिजा हात पार्न सकिनेछ भने बित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामहरु फ’स्टाएर जानेछन् । चाहको वस्तु तथा मनोकामनाहरु पूरा हुनाले मन प्रफुल्लीत हुनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले अग्रजसँग राय बाजिनेछ ।
सिंह : बिहानको समय राम्रो रहेकोले धा’र्मिक तथा सा’स्कृतक सभा सभारोहमा सहभागी हुने अवसर जुर्नेछ । धा’र्मिक पुस्तक अध्ययन गरि बौद्धिक क्षेत्र फ’राकिलो पार्न सकिनेछ । मध्यान्हबाट राज्यबाट अनाबश्यक झै झमेला भोग्नु पर्नेछ भने सेवा प्रबाह गर्नेहरुले तपार्ईँको काम समयमा नगर्दिनाले महत्वपुर्ण उपलव्धी गुम्न सक्छ । माया प्रे’ममा सामान्य अ’विश्वास सिर्जना हुने योग रहेकोछ ।
कन्या : खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ भने अध्ययनमा प्रगती भएर जाने छ । धा’र्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिर तिरको यात्राको तय गर्न सकिने छ । सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपार्ईँको गतिलो उपश्थिति रहनेछ । परिवारजनको सहयोगले नयाँ योजनाहरु बनाई आर्थिक अवस्था सुदृड बनाउन सकिनेछ । लामो दुरिको शैक्षिक तथा धा’र्मिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
तुला : नचाहादा नचाहादै नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ भने अ’प्रिय घ’ट्ना घट्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापारमा समय दिए पनि आम्दानी न्युन हुने हुँदा आवस्यक्ता टार्न मुस्किल पर्नेछ। पढाइमा मन नजाने तथा अरुकै पोल्टोमा नतिजा पर्नेछ । प्रे’ममा धोका हुने तथा घर परिवारमा आफन्त सँग सामान्य कुरामा नै ठुलो बि’वाद हुनेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँने तथा बेवास्ता गर्दा ठुलो रोग लाग्न सक्छ सचेत रहनुहोला ।
बृश्चिक : प्रे’म तथा मित्रताको व’न्धन कसिलो हुनेछ भने दा’म्पत्य जीवन सुखि रहनेछ । बिभिन्न भौतिक वस्तु तथा वि’लाशी सामानको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मनजाने हुनाले अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने लामो दुरिको व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
धनु : बिहानको समय राम्रो रहेकोले सन्तान तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग पाईने योग रहेकोछ। मन परेको मानिसबाट उपहार प्राप्तीको योग रहेकोछ। मध्यान्हबाट व्यापार व्यावसायमा लगानी गरे अनुशार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आर्थिक रुपमा कमजोर भएको महशुष हुनेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या आउने तथा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्या’यिक निर्णयहरु तपार्ईँको पक्षमा नआउने हुनाले आजको दिन कुनै पनि वि’वादमा सामेल नहुनु होला ।
मकर : बौद्धिकताको ल’डाईमा तपार्ईँ कै नाम उच्च स्थानमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुने छ । शेयर बजारमा गरीएको लगानीबाट भने जस्तो प्रति फल प्राप्त हुनाले दैनिकी सहज हुने छ । अध्ययनमा मन जाने हुनाले नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । आ’कस्मिक धन तथा सम्पती लाभ हुनेछ भने उपाहार पाइने तथा चिठ्ठा प्राप्तिको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिने हुनाले ईच्छित कामनाहरु पुरा हुनेछन् ।
कुम्भ : आत्मिय साथी तथा आफन्तसँग मन मु’टाव बढ्ने छ । आमा तथा आमा सरहका मानिससँग बिवाद बढ्ने योग रहेको छ । प्रतिस्पर्धीहरुले काममा अवरोध पु¥याउन सक्छन् ध्यान दिनु होला । अध्ययन तथा अध्यापनमा तपार्ईँ आफ्नै कारणले पछी पर्नु हुनेछ । सामान्य छा’ती स’म्वन्धी स’मस्या आउन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । राजनीतिमा जनताको समर्थन पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । तरपनि कृषी तथा पशुपालन व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ ।
मीन : बिहानको समय राम्रो रहेकोले लेखन कलाको माध्ययमले आफ्ना भनाईहरु जन मानसमा लैैजान सकिने छ । पढ्न लेख्न मन लाग्नेछ भने नतिजा तपार्ईँ आफ्नै पक्षमा पार्न सकिने छ । मध्यान्हबाट माया प्रेममा सानो कुराले मन मु’टाव सिर्जना हुनसक्छ ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्य सम्बन्धि स’मस्या आउनेछ । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला क’ष्टकर नहोला भन्न सकिन्न । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।